Munhu wekumabvazuva uyo anokunda (1-7)
Israeri anosarudzwa kuti ave mushumiri waMwari (8-20)
“Shamwari yangu Abrahamu” (8)
Vamwe vanamwari vanonzi varatidze kuti ndivanamwari (21-29)
41 “Nditeererei makanyarara,* imi zvitsuwa;Marudzi ngaawanezve simba rawo. Ngaaswedere pedyo; uye ngaataure.+ Ngatiunganei kuzotongwa. 2 Ndiani aita kuti pave nemumwe munhu anobva kumabvazuva?+ Achimushevedza mukururama kuti auye patsoka dzake,*Kuti aise marudzi mumaoko akeUye kuti amuite kuti akunde madzimambo?+ Ndiani anoaita kuti asare ava guruva pamberi pebakatwa rake,Semashanga ari kupeperetswa nemhepo, pamberi peuta hwake? 3 Anoatevera achipfuura pasina chinomuvhiringidza,Achifamba nemumakwara asina kumbofambwa netsoka dzake. 4 Ndiani abata basa iri, achiita izvi,Achishevedza zvizvarwa kubvira pakutanga? Ini Jehovha, ndini Wekutanga;+Uye kuzvizvarwa zvekupedzisira ndinongova iye mumwe chete.”+ 5 Zvitsuwa zvakazviona zvikatya. Migumo yenyika yakatanga kudedera. Inoswedera pedyo youya pamberi. 6 Mumwe nemumwe anobatsira shamwari yake,Oti kuhama yake: “Simba.” 7 Saka mhizha inosimbisa mupfuri wesimbi;+Munhu anorova nesando achiita kuti zvienzaneAnosimbisa uya anopfura achishandisa pekupfurira. Anoti nezvekubatanidza simbi: “Dzaitwa zvakanaka.” Mufananidzo wacho unobva wabatanidzwa nezvipikiri kuti urege kudonha. 8 “Asi iwe, haiwa Israeri, uri mushumiri wangu,+Iwe Jakobho wandakasarudza,+Vana* veshamwari yangu Abrahamu,+ 9 Iwe wandakatora kumigumo yenyika,+Uye iwe wandakashevedza kubva kumativi ayo ari kure chaizvo. Ndakati kwauri, ‘Uri mushumiri wangu;+Ndakusarudza; handina kukuramba.+ 10 Usatya, nekuti ndinewe.+ Usanetseka, nekuti ndiri Mwari wako.+ Ndichakusimbisa, chokwadi ndichakubatsira,+Chokwadi ndicharamba ndakakubata neruoko rwangu rwerudyi rwekururama.’ 11 Inzwa! Vaya vese vari kukutsamwira chaizvo vachanyadziswa voninipiswa.+ Vaya vanorwa newe vachasara vasiri chinhu uye vachaparara.+ 12 Uchatsvaga varume vari kurwa newe, asi hauzovawani;Varume vari kukurwisa vachaita sevasipo, sechinhu chisingabatsiri.+ 13 Nekuti ini Jehovha Mwari wako, ndakabata ruoko rwako rwerudyi,Uye ndini ndiri kuti kwauri, ‘Usatya. Ndichakubatsira.’+ 14 Usatya Jakobho, iwe honye,*+Imi varume veIsraeri, ini ndichakubatsirai,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, iye Mudzikinuri wenyu,+ Mutsvene waIsraeri. 15 “Inzwa! Ndakuita chirei chekupurisa,+Mudziyo wekupurisa mutsva une mazino anocheka nekwese. Uchatsika-tsika makomo woaputsaWoita kuti zvikomo zviite sehundi. 16 Uchazviurutsa,Uye mhepo ichazvitakura;Dutu richazviparadzira. Uchafara muna Jehovha,+Uye uchazvirumbidza pamusoro peMutsvene waIsraeri.”+ 17 “Varombo nevanoshayiwa vari kutsvaga mvura, asi vari kuishaya. Rurimi rwavo rwakaoma nenyota.+ Ini Jehovha ndichavapindura.+ Ini Mwari waIsraeri, handizovasiyi.+ 18 Ndichaita kuti nzizi dziyerere muzvikomo zvisina chinhu+Nezvitubu mumapani.+ Ndichaita kuti renje rive dziva remvura rine tsanga zhinjiUye kuti nyika isina mvura ive zvitubu zvemvura.+ 19 Mugwenga ndichadyara musidhari,Mubayamhondoro nemukute nemuti wemupaini.+ Murenje ndichadyara mujunipa,Pamwe chete nemufiri nemusaipresi,+ 20 Kuti vanhu vese vaone uye vazive,Vateerere uye vanzwisise,Kuti ruoko rwaJehovha rwaita izvi,Uye kuti iye Mutsvene waIsraeri azviunza.”+ 21 “Taurai nyaya yenyu,” anodaro Jehovha. “Ipai uchapupu hwenyu,” anodaro Mambo waJakobho. 22 “Ipai uchapupu uye tiudzei zvinhu zvichaitika. Tiudzei zvinhu zvekare,*Kuti tifunge nezvazvo,* toziva kuti zvichaguma nei. Kana kuti tizivisei zvinhu zviri kuuya.+ 23 Tiudzei zvichaitika mune ramangwana,Kuti tizive kuti muri vanamwari.+ Itai chimwe chinhu, chakanaka kana kuti chakaipa,Kuti tishamiswe patinochiona.+ 24 Inzwai! Muri chinhu chisipo,Uye zvamakaita hazvibatsiri.+ Chero anokusarudzai anosemesa.+ 25 Ndaita kuti pave neanobva kuchamhembe, uye achauya,+Iye anobva kumabvazuva,+ uyo achadana zita rangu. Achatsika-tsika vatongi* sekunge kuti ivhu,+Semuumbi anotsika-tsika ivhu nyoro. 26 Ndiani akataura pamusoro peizvi kubvira pakutanga, kuti tizive,Kana kuti kubvira panguva yakapfuura, kuti titi, ‘Iye akarurama’?+ Chokwadi hapana akazvizivisa! Hapana akazvitaura! Hapana ane chaakanzwa kwamuri!”+ 27 Ndini ndakatanga kuti kuZiyoni: “Tarisai muone! Hezvino zvichaitika!”+ Uye ndichatumira munhu anoenda nemashoko akanaka kuJerusarema.+ 28 Asi ndakaramba ndakatarisa, uye pakanga pasina munhu;Pakati pavo pakanga pasina anopa mazano. Uye ndakaramba ndichivaudza kuti vapindure. 29 Onai! Vese chinhu chisipo. Mabasa avo haabatsiri. Mifananidzo yavo yesimbi* imhepo uye haisi yechokwadi.+
^ Kana kuti “Rambai makanyarara pamberi pangu.”
^ Kureva kuti auye kuzomushumira.
^ Kureva kuti asingagoni kuzvidzivirira uye akaderera.
^ Kana kuti “tiise mwoyo yedu pazviri.”
^ Kana kuti “vatevedzeri vevatongi.”